သတင်း - ကုန်ပစ္စည်းသုံးသပ်မှု - သုံးစွဲသူဘက်
၁။ ဆလင်ဒါအသုံးပြုရန်အတွက်လေအရည်အသွေးလိုအပ်ချက်များ - သန့်ရှင်းခြောက်သွေ့သော compressed air ကိုအသုံးပြုသင့်သည်။ လေထဲတွင်အော်ဂဲနစ်အရည်ပျော်ပစ္စည်းဒြပ်ပေါင်းများ၊ ဆား၊ corrosive gas စသည်တို့မပါ ၀ င်သင့်ပါ။ ဆလင်ဒါ၊ အဆို့ရှင်မကောင်းမှုကိုတားဆီးရန်အတွက်တပ်ဆင်ခြင်းမတိုင်မီ connection pipe ကိုအပြည့်အဝလွင့်ပစ်။ ဆေးကြောသင့်သည်။ အမှုန့်များနှင့်အခြားအညစ်အကြေးများကိုဆလင်ဒါ၊ အဆို့သို့မသွင်းပါနှင့်။
၂။ ဆလင်ဒါအသုံးပြုရန်အတွက်လိုအပ်ချက်များ။ ဖုန်မှုန့်များ၊ ရေစက်များနှင့်ရေနံမှုန့်များပြားသည့်နေရာများတွင်လှံ၏ဘေးဘက်ကိုတယ်လီစကုပ်အကာအကွယ်ပေးသည့်အဖုံးများတပ်ဆင်ထားသင့်သည်။ တယ်လီစကုပ်အကာအကွယ်အဖုံးများကိုမသုံးနိုင်ပါကခိုင်ခံ့သောဖုန်မှုန့်ကွင်းများနှင့်ရေစိုခံဆလင်ဒါများရှိသည့်ဆလင်ဒါများကိုရွေးချယ်သင့်သည်။ ဆလင်ဒါ၏ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ကိုရွေးချယ်သင့်သည်။ အပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်သံလိုက်ခလုတ်၊ -10 ~ 60 exceed ထက်ပိုသောအပူချိန်ကိုခံသင့်ပါသည်။ အားကောင်းသောသံလိုက်စက်ကွင်း၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အားကောင်းသောသံလိုက်စက်၏အလိုအလျောက်ပြောင်းခြင်းရှိသည့်ဆလင်ဒါကိုရွေးချယ်သင့်ပါသည်။ တံဆိပ်ခတ်သံနှင့်အတူဖုန်ကြွနေသောအငွေ့များတွင်အသုံးမပြုသင့်ပါ။
၃ ။Oil-lubricated cylinders များကိုဆီလျော်သောစီးဆင်းမှုရှိသောဆီအငွေ့နှင့်အတူတပ်ဆင်ထားသင့်သည်။ ဆလင်ဒါကိုဆီနှင့်ချောမထားပါ။ ၎င်းကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အမဲဆီကို cylinder တွင်ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤဆလင်ဒါကိုဆီအတွက်လည်းသုံးနိုင်သည်၊ သို့သော်ဆီကိုပေးသည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ 1 (ISO VG32) ။ NBR နှင့်အခြားတံဆိပ်များကိုနှစ်ခါဖုန်တိုးခြင်းမှရှောင်ရှားရန်ရေနံ၊ ဗိုင်းလိပ်တံဆီစသည်တို့ကိုမသုံးပါနှင့်။
4. ဆလင်ဒါဝန် ပစ္စတင်လှံတံသည်များသောအားဖြင့် axial load ကိုသာထောက်ပံ့နိုင်သည်။ piston rod အပေါ်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်နှင့် ၀ င်ဆန့်သောဝန်ကိုအသုံးချခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ပါ။ transversal load ရှိပါကလမ်းညွှန်စက်ပေါ်ရှိ piston rod ကိုထည့်ရန် (သို့) guide rod cylinder ကိုရွေးချယ်သင့်သည်။ load direction ပြောင်းလဲခြင်း၊ piston လှံတံရှေ့မျက်နှာနှင့် load * တို့သည် floating joint ကိုအသုံးပြုသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်မည်သည့်အနေအထားတွင်မဆိုချိုးဖျက်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဆလင်ဒါသည်ပြင်းထန်သောအင်အားအောက်ရောက်သောအခါဆလင်ဒါ၏ installation ဇယားသည်ရှိလိမ့်မည်။ လျော့ရဲခြင်း, ပုံပျက်သောနှင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကာကွယ်တားဆီးဖို့အစီအမံ။
၅။ ဆလင်ဒါတပ်ဆင်ခြင်း - Fixed cylinder ကိုတပ်ဆင်သောအခါ load ၏ ၀ င်ရိုးနှင့် piston virga တို့သည်အတူတူပင်ဖြစ်သင့်သည်။ earring သို့မဟုတ် trunnion cylinders များတပ်ဆင်သောအခါဆလင်ဒါ၏ swing plane နှင့် load ၏ swing သည်သေချာသည်။
6. ဆလင်ဒါ၏မြန်နှုန်းညှိနှိုင်းမှု: မြန်နှုန်းထိန်းချုပ်သောအဆို့ရှင်သည်ဆလင်ဒါ၏အမြန်နှုန်းကိုထိန်းညှိရန်အသုံးပြုသောအခါ၎င်း၏အဆို့ရှင်အဆို့ရှင်ကိုအပြည့်အဝတံခါးပိတ်ဖွင့်ပြီးတပ်ဆင်လိုသောအရှိန်နှင့်ချိန်ညှိသင့်သည်။ * အလှည့်အရေအတွက်ထက်မကျော်ရန်အလှည့်အရေအတွက်ကိုညှိပါ။ ညှိနှိုင်းမှုအပြီးတွင်သော့ခတ် သော့ခတ်မာစတာ။
၇ ။ ဆလင်ဒါ၏ရွေ့လျားစွမ်းအင်ကိုဆလင်ဒါကိုယ်နှိုက်ကလုံးဝမစုပ်ယူနိုင်သည့်အခါ (ဥပမာဟိုက်ဒရောလစ်ကြားခံကဲ့သို့) ကြားခံယန္တရားတစ်ခုသို့မဟုတ်ကြားခံကွင်းဆက်အားအပြင်ဘက်သို့ထည့်သင့်သည်။
၈။ ဆလင်ဒါ၏အလိုအလျောက်လည်ပတ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ -အလိုအလျောက်လည်ပတ်ရေးကိရိယာအတွက်မမှန်ကန်သောလည်ပတ်မှုနှင့်ဆလင်ဒါလုပ်ဆောင်မှုသံသရာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်စက်ပစ္စည်းပျက်စီးခြင်းကိုကာကွယ်ရန်ယန္တရားသို့မဟုတ်တိုက်နယ်တွင်တန်ပြန်အစီအမံများပြုလုပ်သင့်သည်။ ဆလင်ဒါ၏လည်ပတ်မှုလက္ခဏာများလေ့လာမှုမှအမှန်တကယ်ထွက်ရှိမှုအားဆုံးဖြတ်ရန်ခက်ခဲသည် ပါဝါဆလင်ဒါ၏။ ထို့ကြောင့်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဆလင်ဒါ၏ထွက်ရှိမှုလေ့လာခြင်းတွင်ဆန့်ကျင်သည်ဝန်အချက်၏အယူအဆကိုအသုံးပြုသည်။ Cylinder load factor beta ကို beta = cylinder သီအိုရီနှင့်အမှန်တကယ်ဝန်၏ F = 100% cylinder Ft (l3-5) ၏ output force အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ အမှန်တကယ်ဝန်ဆလင်ဒါသည်အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်သောအခြေအနေပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အကယ်၍ cylinder theta ကိုအတည်ပြုလျှင်၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဆလင်ဒါ၏သီအိုရီအားဖြင့်သတ်မှတ်သည်ဆလင်ဒါထွင်းဖေါက်တွက်ချက်နိုင်သည့် output ကိုပါဝါ, ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ pneumatic clamping တွင်အသုံးပြုသောဆလင်ဒါကဲ့သို့ impedance load အတွက် load သည် inertia force ကိုမထုတ်လုပ်နိုင်ပါ။ ယေဘုယျ select load load factor သည် ၀.၈ ဖြစ်သည်။ inertial load သည် workpiece ကိုတွန်းရန်အသုံးပြုသော cylinder ကဲ့သို့ load သည် inertial force, load ကိုထုတ်လုပ်လိမ့်မည်။ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းနှုန်းထားတန်ဖိုးကို: <0.65 ဆလင်ဒါအနိမ့်မြန်နှုန်းမှာရွေ့လျားသောအခါ, V <100 မီလီမီတာ / s; <0.5 ဆလင်ဒါအလတ်စားမြန်နှုန်းမှာရွေ့လျားသောအခါ, V = 100 ~ 500mm /s;<0.35 အခါဆလင်ဒါမြန်နှုန်းမြင့်လှုပ်ရှားမှု , v> 500 မီလီမီတာ / s ကို။ SMC သံလိုက် switch ခ၏အခန်းကဏ္: SMC သံလိုက်ခလုတ်သည်စက်မှုစက်ယန္တရားများ၏လှုပ်ရှားမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်အဓိကအသုံးပြုသည်။ 1: 1 မှ 1: 150 အကြားရှိမှုနှုန်း၊ စုစုပေါင်းအရွယ်အစားသည်သေးငယ်သောနေရာများတွင်တပ်ဆင်ရန်၊ drive shaft နှင့် gear drive shaft တို့ဖြစ်သည်။ သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော၊ ဂီယာနှင့် drive ဘုရ်ှသည်အလိုအလျောက် lubricated thermoplastic ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးပစ္စည်းနှင့်အစိတ်အပိုင်းအားလုံးသည်ကောင်းမွန်သော wear ခံနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ပစ္စည်းကိရိယာများသည်ကောင်းမွန်သောရေစိုခံနိုင်မှုနှင့်ဖုန်မှုန့်ဒဏ်ခံနိုင်စွမ်းရှိသည်။ သံလိုက်ခလုတ်ကိုအဓိကအားဖြင့်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုထိန်းချုပ်ရန်အသုံးပြုသည်။ ဓာတ်လှေကားကဲ့သို့သောစက်မှုစက်ယန္တရားများ။ တော်လှန်ရေးအချိုးသည် ၁း၁ မှ ၁း၉,၄၀၀ အထိရှိသည်။ စံသတ်မှတ်ထားသောခလုတ်ခုံများကို ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၆၊ ၈၊ ၁၀၊ ၁၂ အလျင်မြန်သောသို့မဟုတ်နှေးကွေးသောခလုတ်များနှင့်ချွန်ထက်သော CAM PRSL7140PI တပ်ဆင်ထားသည်။ အခြားအစိတ်အပိုင်းများနှင့်တော်လှန်ရေးအချိုးများကိုတောင်းဆိုချက်အရရရှိနိုင်သည်။ အထူးအမှာစာများပြုလုပ်ပါ။ * တော်လှန်ရေးအချိုးသည် ၁း၉,၄၀၀ ဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းများနှင့်အစိတ်အပိုင်းအားလုံးသည်ချေးခြင်း၊ ရေနှင့်ဖုန်မှုန့်များကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။